Ferguson Oo Qirtay Inaysan Wax Horumar Ah Ka Sameynin Doonitaankooda Robin Van Persie. - jornalizem
Ferguson Oo Qirtay Inaysan Wax Horumar Ah Ka Sameynin Doonitaankooda Robin Van Persie.
Sir Alex Ferguson ayaa weli ka rajo qaba inuu la soo wareego ciyaaryahanka Arsenal Robin van Persie, waxaana uu aaminsan yahay inay kooxda u dagaalami doonto saxiixiisa hadii ay doonayaan inay soo xerogeliyaan ciyaaryahanka doonaya inuu ka tago Emirates.
Van Persie ayaa mustaqbalkiisa uu yahay waxyaabaha ugu hadalheynta badan ee suuqa kala iibsiga ee xagaagan, iyadoo United, Manchester City iyo kooxda Talyaaniga Juventus dhamaantood lala xiriiriyay xiddiga reer Holland, kaasoo bilowgii July ku dhawaaqay inuusan qandaraaska u kordhineynin Gunners.
Si kastaba, ilaa iyo haatan ma jiro koox heshiis la gaartay kooxda ka dhisan waqooyiga London, waxaana ay u muuqataa in 29 jirkaan uu sannad kale ku qaadan doono Emirates ka dib markii Gunners ay la soo saxiixdeen Santi Cazorla.
Isagoo ka hadlayay ka dib kulankii saaxiibtinimo ee ay la ciyaareen Barcelona waxa uu yiri Sir Alex Ferguson:
“Waxaan u soo bandhignay dalabkeena, waxaana ay la xaajoonayaan kooxo kale. Waa inaan u dagaalanaa saxiixa ciyaaryahanka”.
“Waxaan rajeyneynaa inay noqon doonto sida aan rabno. Waxaan isku dayaynaa intii awoodeena ah, lakiin haatan wax horumar ah oo arintaasi ku saabsan ma jiraan”.
Sir Alex aaya sidoo kale sheegtay in rabitaanka Gunners aysan ku dooneynin inay iska iibiyaan kabtankooda inay ku tahay caqabad xoogan.
“Xilligan la joogo niyad wanaag kama qabo arintaan, waa inaan taas qirtaa. Wax is afgarad ah waan ka helin la’nahay Arsenal”.
“Waa adag tahay in la yiraahdo sababta ay sidaan ugu shaqeynayaan. Ma aqaano waxa ay ku fekerayaan sababtoo ah waxba banaanka ma soo dhigayaan”.